နိုင်ငံတကာအိုလံပစ်ကော်မတီ(IOC) က တရုတ်ပြည်သူများအား အိုလံပစ်ဆုဖလား ဂုဏ်ပြုပေးအပ် - Xinhua News Agency
နိုင်ငံတကာအိုလံပစ်ကော်မတီ(IOC) ဥက္ကဌက တရုတ်ပြည်သူများအား ဂုဏ်ပြုဆုတံဆိပ် ပေးအပ်နေစဉ်(ဆင်ဟွာ)
ပေကျင်း ၊ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၀ ရက်(ဆင်ဟွာ)
ဖေဖော်ဝါရီ ၁၉ ရက်က ကျင်းပပြုလုပ်သော ၁၃၉ ကြိမ်မြောက် နိုင်ငံတကာအိုလံပစ်ကော်မတီ(IOC) ၏ ပုံမှန်အစည်းအဝေးအတွင်း IOC ဥက္ကဌ Thomas Bach က ပေကျင်း ၂၀၂၂ ဆောင်းရာသီအိုလံပစ်ပြိုင်ပွဲအတွက် တရုတ်ပြည်သူများ၏ ထောက်ခံအားပေးမှုကို အသိအမှတ်ပြုဂုဏ်ပြုသည့်အနေဖြင့် ၎င်းတို့အား နိုင်ငံတကာအိုလံပစ်ကော်မတီ( IOC) က အိုလံပစ်ဆုဖလားကို ပေးအပ်ချီးမြှင့်ခဲ့ကြောင်း ထုတ်ဖော်ပြောကြားခဲ့သည်။“ ပေကျင်း ၂၀၂၂ ဆောင်းရာသီအိုလံပစ်ပြိုင်ပွဲဟာ တရုတ်ပြည်သူတွေရဲ့ထောက်ခံအားပေးမှုမပါဘဲနဲ့ ဒီလိုထူးကဲကောင်းမွန်တဲ့အဆင့်နဲ့ အောင်အောင်မြင်မြင်ကျင်းပပြုလုပ်နိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူး ၊ သူတို့ရဲ့နွေးထွေးမှု ၊ ကြိုးပမ်းအားထုတ်မှု ၊ ဧည့်ဝတ်ကျေပွန်မှု နဲ့ ထောက်ခံအားပေးမှုကို ကျွန်တော်တို့ သိရှိခံစားနိုင်ပါတယ်။ ဒီပြိုင်ပွဲကြီးကို အကောင်းဆုံးအအောင်မြင်ဆုံးဖြစ်အောင် သူတို့ရဲ့ ကတိကဝတ်ကို ဖော်ဆောင်နိုင်ခဲ့ပါတယ်” ဟု Bach က ဆိုသည်။
“ နယ်ပယ်ပေါင်းစုံက တရုတ်ပြည်သူတွေ ၊ မျိုးဆက်အသီးသီးက ၊ ယဉ်ကျေးမှုကမ္ဘာက ၊ အနုပညာရှင်တွေ ၊ သိပ္ပံပညာရှင်တွေ ၊ အင်ဂျင်နီယာတွေ ၊ ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေနဲ့ ထောင်ပေါင်းများစွာသော စေတနာ့ဝန်ထမ်း တရုတ်နိုင်ငံသားတွေဟာ အားကစားသမားတွေကို သိပ်ကိုလှိုက်လှိုက်လှဲလှဲ နွေးနွေးထွေးထွေး ကြိုဆိုခဲ့ကြတယ် ၊ ဒါဟာ ပေကျင်းဆောင်းရာသီအိုလံပစ်ပြိုင်ပွဲ အောင်အောင်မြင်မြင်ကျင်းပနိုင်ဖို့ အမှန်တကယ် နွေးထွေးပြုငှာမှုဖြစ်သလို သိပ်ကိုအရေးပါတဲ့အချက်တစ်ခုလည်းဖြစ်တယ် ” ဟု ၎င်းက ဖြည့်စွက်ပြောကြားခဲ့သည်။
ယနေ့ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၀ ရက်တွင် ပြုလုပ်မည့် ပေကျင်းဆောင်းရာသီအိုလံပစ်ပိတ်ပွဲမတိုင်ခင်တစ်ရက်အလို ဖေဖော်ဝါရီ ၁၉ ရက်တွင် ကျင်းပခဲ့သည့် နိုင်ငံတကာအိုလံပစ်ကော်မတီ၏ ပုံမှန်အစည်းအဝေးတစ်ခု၌ ပေကျင်း ၂၀၂၂ အတွက် IOC ညှိနှိုင်းရေးကော်မရှင်ဥက္ကဌ Juan Antonio Samaranch Jr နှင့် ပေကျင်း ၂၀၂၂ ကျင်းပရေးကော်မတီ တို့မှ ထုတ်ပြန်သည့် နောက်ဆုံးအစီရင်ခံစာများထဲတွင် တရုတ်ပြည်သူများအား ထိုသို့ အထူးအသိအမှတ်ပြု ဂုဏ်ပြုဆုပေးအပ်ချီးမြှင့်ကြောင်း ထည့်သွင်းဖော်ပြခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
ပြီးခဲ့သော ပေကျင်း ၂၀၀၈ အိုလံပစ်ပြိုင်ပွဲကျင်းပပြီးချိန်ကလည်း နိုင်ငံတကာအိုလံပစ်ကော်မတီ(IOC) က အိုလံပစ်ပြိုင်ပွဲအောင်မြင်စွာကျင်းပနိုင်ရန် ၎င်း၏ ကြီးမားသော ကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုများကို အသိအမှတ်ပြု ဂုဏ်ပြုသောအားဖြင့် အိုလံပစ်ဆုဖလားကို တရုတ်နိုင်ငံထံ ပေးအပ်ချီးမြှင့်ခဲ့ဖူးကြောင်း သိရသည်။(Xinhua)
BEIJING, Feb. 19 (Xinhua) — The International Olympic Committee (IOC) has awarded the Olympic Cup to the Chinese people in recognition of their support for the Beijing 2022 Olympic Winter Games, IOC President Thomas Bach announced during the 139th IOC session here on Saturday.
“The Beijing 2022 could not have achieved this level of excellence without the support of the Chinese people. We could feel their warmth, energy, hospitality and support. They were greatly committed to the success of the Games,” Bach said.
“Chinese people from all walks of life, across all generations, from the cultural world, artists, scientists, engineers, school children and the thousands of volunteers, all welcomed the athletes and us very warmly. This was truly heart-warming and crucial for the success of the Beijing Winter Olympics,” he added.
COVID-19 ရောဂါ နောက်ဆုံးကူးစက်ပြန့်နှံ့မှုကို တိုက်ဖျက်ရန် ဟောင်ကောင်သို့ တရုတ်ပြည်မကြီးမှ ဒုတိယအသုတ် ဆေးဘက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့ရောက်ရှိ
စစ်ပွဲကို ဗန်းပြပြီး အမှန်ကိုဖုံးကွယ်ဖို့ မည်သူမျှ မလုပ်ဆောင်သင့်ကြောင်း တရုတ်ပြောခွင့်ရသူဆို